Makumi makumi maviri eminamato yebasa rinobatsira | MINYENGETERO MARI
musha Uncategorized 20 Minamato yeminamato yebasa rinobatsira
Pisarema 113: 7-8:
7 Anosimudza murombo abve muguruva, uye anosimudza vanoshayiwa kubva mugomba. 8 Kuti amuite iye namachinda, Iwo machinda avanhu vake.
Isu tinobatira Mwari wa basa rinobatsira, ndosaka tiri kuita aya makumi maviri eminyengetero mikana yekuwana basa rinobatsira. Iyi minamato yenamato inozoshandura nzvimbo yako yebasa kana iwe uchingovanyengetera mukutenda. Mwari wedu ndiMwari anoshanda anoshamisa, Iye anoziva nzira yekushandura mamiriro edu kubva pauswa kusvika munyasha. Kana tikadana kwaari muminamato, iye anosimuka kuti atidzivirire uye atendeusire mamiriro edu ezvinhu kune zvakanaka. Iwe unoda here basa rinobatsira? Wakaneta here neako Jobho aripo? Kana hongu, enda pamabvi ako uye unamate. Nzwisisa kuti unoda ruoko rwaMwari kuti uchengetedze kufarirwa muhupenyu hwako uye zvauri kuenda. Tenda Mwari nekuda kwemabasa ako epamoyo, iwo akakura asi zvinotora Mwari kuti vakubatanidze iwe kumadzimambo epasi. Joseph haana kumbobvira ane humbowo asi Mwari akamubatanidza, kumusoro. Mwari vanokwanisa zvakare kukubatanidza kumusoro kana iwe uchivimba naye uye uchidana paari muminamato.
Munamato uyu unonongedzera kubasa rinobatsira rinovhura mikova yekukufarira muhupenyu hwako hwebasa. Sezvo iwe uchiita iyi minamato yeminamato, ini ndinoona Mwari webasa rinobatsira, kukubatanidza nekukwirira kukuru muhupenyu hwako hwebasa. Usakanda mapfumo pasi kuna Mwari, kunyangwe wakaderera papi izvozvi, ungatoshaya kana basa rekubatirira parizvino, asi sezvo uchiita idzi minamato dzanhasi, Mwari vachasimuka vachimirira iwe uye nekukonzera varume nevakadzi. zvine basa newe. Iwe uchave uine yako pachako basa rekuita nhasi uye zita raMwari richakudzwa. Ndinotarisira kuverenga zvirevo zvako.
1. Baba, ndinokutendai nekuda kwechishamiso changu Jobho, muzita raJesu.
2. O Ishe, itai kuti ndinzwirwe tsitsi nevose vanozofunga nezvekushanda kwangu muzita raJesu
3. O Ishe, musina kusheedzera chero munhu anga akagara pabasa rangu nhasi, ngakuve nekutsiva kwaMwari muzita raJesu.
4. Ini ndinoramba mweya we muswe uye ini ndinoda mweya we musoro, muzita raJesu.
5. Ndinozivisa kuti ani naani achaputsa basa rangu kuti riputswe abviswe oendeswa kune imwe nzvimbo, muzita raJesu.
6. O Ishe, chinja, bvisa kana shandura vese vamiriri vevanhu vari kukarira kumisa basa rangu.
7. Ini ndinogashira kuzodzwa kuti nditapure pamusoro pevangu vezera rangu, muzita raJesu.
8. Ishe, nditorei kumusoro sezvamakaitira Josefa munyika yeIjipita muzita raJesu.
9. Ini ndinosungira munhu wese ane simba akapihwa basa kuti atadzise kufambira mberi kwangu, muzita raJesu.
10. O Ishe, tungamidza vatumwa vako kuti vabvise chero chinogumbura pabasa rangu rinobatsira muzita raJesu.
11. Ini ndinosunga uye ndinopa mweya yeva padyo budiriro chirwere muzita raJesu rakasimba.
12. Ini ndinoreva chinzvimbo cha (taura chinzvimbo chako chaunotenda nekutenda) muzita rakasimba raJesu
13. Ishe, nyisai nyaya yangu mundangariro dzevaya vandibatsire kuitira kuti vasatambura nekurasikirwa nedhimoni nekurangarira muzita raJesu.
14. Ini ndinoremedza basa remaoko ekubata vavengi nevamadhimoni mumabasa angu, muzita raJesu.
15.Vapikisi vese vebasa rangu rakanaka ngavanyadziswe, muzita raJesu.
16. Ini ndinoti simba rekukunda uye kukunda pakati pevose vanokwikwidza, muzita raJesu.
17. Chero sarudzo chero yebvunzurudzo yebasa ngandiitirwe zvakanaka, muzita raJesu.
18. Vanokwikwidza vese neni mune ino nyaya vanowana kukundwa kwangu kusingagoneki, muzita raJesu.
19. Baba, ndinokutendai nekuda kweuchapupu hwebasa rangu rinobatsira
20. Baba ndinokutendai nekupindura minamato yangu muzita raJesu.
Previous nyaya60 Kununura Munamato Uchishandisa Ropa raJesu
inotevera15 Kununura munamato pamweya inozivikanwa
Kunamata Kunongedzera Kupokana Nechibairo Chakaipa
Kunamata Pfungwa Kupokana neBusiti Kukundikana
Hondo Minamato neMagwaro
Kenneth mugambi Ndira 30, 2020 At 6:55 pm
Ishe ngaatungamire, vandidzivirire kune rangu destiny yekubatanidza kuburikidza naAmeni wako.
Tuwb Shalom Kurume 9, 2020 Pa 12: 08 am
ISHE JESU nditungamire uye unditungamire uye undigadzirire iyo Yekudzoka kwako kundichengetedza kubva kuutapwa uye kure kuvavengi nevakaipa. Kuda kwenyu ngakuitwe muzita raJESU. Ameni
Caroline Louise Nauises Kurume 30, 2020 At 9:46 pm
Ishe vandidzivirire nemhuri yangu munguva ino inotyisa, Ishe Mwari ndinzwireiwo tsitsi, vhuraiwo gonhi repedyo, vhurai masuo amafashama emahara, ngapave nezvishamiso paupenyu hwangu, dai mandivhurira mikana yebhizinesi, mikana yebasa, michato , kuda kwenyu ngakuitwe pamusoro pehupenyu hwangu munaJesu ane zita randinonamata. Ameni
Linda Opere June 30, 2020 Pa 9: 26 am
Vanodikanwa Ishe, ndiisirei kwandiri basa risingaperi uye ndive mune yekubvunzurudzwa Panzvimbo ..
Ini ndinoreva chinzvimbo ichi muzita raJesu Kristu ..
MUSIIME ANOKOSHA Zvita 7, 2020 At 7:09 am
Anodiwa Ishe, regai murume wangu Joseph agamuchire basa rekuti echo-cordinator kuAFENET uganda mwedzi uno muZITA RAJESU NDAKANAMATA.
Virginia Tocho Chivabvu 5, 2021 nenguva dza 1:22 pm
Ini ndinokurudzirwa neaya mabara nezve anobatsira vashandirwi. Ivo vari kutaura nezvangu
50 vhezheni bhaibheri nezve zvivi kjv
MUNAMATO PASI PAMWARI NDEGE MU2021
Minamato inopesana nemweya wehasha uye chigumbu